उत्तर–दक्षिण करिडोरअन्तर्गतको कोशी करिडोरमा बाँकी स्थानमा ट्र्याक खोल्ने कामसँगै सडक स्तरोन्नतिसमेत अघि बढेको छ । कठिन भौगोलक अवस्था र अरु विभिन्न चुनौती भए पनि सो करिडोर निर्माण अघि बढिरहेको छ ।
दक्षिणमा मोरङको जोगवनीदेखि उत्तरमा सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्म रहेको छ । यसले उत्तरमा चीनको सीमादेखि दक्षिणमा भारतीय सीमालाई जोड्छ । मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा र तेह्रथुमको क्षेत्र भाग भएर राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
प्रचण्ड मुक्त पार्टी बनाउन हिंडेका प्रभु साह अब कता जान्छन ?
सांसद नभएकाले कारबाही नहुने : ६ महिना मन्त्री मै टिक्ने मणिको दाउ !
कोमल वलीद्वारा रघुजी पन्तविरुद्ध हालिन मुद्धा
भक्तपुर र ललितपुरमा विविध कार्यक्रमका बीच महिला दिवस सम्पन्न
दैलेख मृत्यु प्रकरणः आमा र छोराको शव भेटियो